Isicindezeli solimi lwe-Bamboo
2014/10/15 Ukungenisa Nokuthekelisa Kwe-China
I-China Import and Export Fair ingenye yemibukiso yokuqala inkampani yethu ebambe iqhaza kuyo, futhi futhi nokuqala komkhankaso omkhulu. Amakhasimende embukisweni agcine ubudlelwane besikhathi eside bokubambisana nathi
2016/9/8 Umbukiso Wokunakekelwa Kwezempilo e-Afrika
Inkampani yethu ibambe iqhaza embukisweni wokunakekelwa kwezempilo e-Afrika futhi yaxhumana kakhulu namakhasimende amakhasimende endawo. Njengamanje, siphinde sigcine ukubambisana namakhasimende amaningi e-Afrika. Imikhiqizo ethunyelwa kwamanye amazwe icishe ibe yizigidi ezintathu zamaRandi aseMelika ngonyaka.
Inkampani yethu ibambe iqhaza ku-CMEF, kuye kwakhonjiswa izinto ezingaphezu kuka-100 zemikhiqizo, futhi zithandwa ngokuphelele ngamakhasimende, futhi zixhumana namakhasimende amaningi futhi zibamba iqhaza ekubambisaneni.
Isakhiwo No.1,3,4,5, Bamboo Industrial Zone, Xiaofeng Town, Anji County, Huzhou City, Zhejiang, PRC PC: 313300